Man City Oo Stamford Bridge Guuldaro Ku Soo Baday Chelsea, Kevin de Bruyne Oo Gool Cajiib Ah Ku Ugaadhsaday Koxodiisii Hore Ee Blues Iyo Guardiola Oo Ugu Danbayn Conte Dhulka Dhigay. – WWW.Gool24.net
Man City Oo Stamford Bridge Guuldaro Ku Soo Baday Chelsea, Kevin de Bruyne Oo Gool Cajiib Ah Ku Ugaadhsaday Koxodiisii Hore Ee Blues Iyo Guardiola Oo Ugu Danbayn Conte Dhulka Dhigay.
Manchester City ayaa halkeeda ka sii wadatay guulihii xidhiidhka ahaa ee ay soo gaadhaysay waxayna Stamford Bridge ku soo garaacday kooxda Antonio Conte ee Chelsea. Manchester City ayaa dib ugu soo laabtay hogaanka Premier leaque kadib markii ay ka soo gudubtay imtixaankii Blues iyada oo Kevin De Bruyne uu gool cajiib ah ku dhulka ku dhigay kooxdiisii hore ee Chelsea.
Pep Guardiola ayaa markiisa saddexda dhibcood Stamford Bridge kaga soo qaatay Antonio Conte oo uu xili ciyaareedkii hore laba guuldaro kala kulmay waxayna hadda City markale dhibco la wadaagtaa Man United oo ay min 19 dhibcood wadaagaan laakiin Man City ayaa farqiga goolasha oo 20 ah kaga saraysa farqiga goolasha Man United oo ah 19 gool.
Manchester City ayaa qaybtii hore ee kulankan soo bandhigtay awood ciyaareed oo ay si buuxda ugaga saraysay kooxda ay martida u ahayd ee Chelsea laakiin Guardiola ayaa si wayn uga cadhaysnaa isla markaana uga walwalsanaa in kooxdiisu ayna ka faa’iidaysan, kubbad haysashadii iyo fursad abuuristii ay samaysay qayhtii hore ee ciyaarta.
Inkasta oo ay Chelsea lafteedu fursad abuuris fiican samaysay haddaba xogta qaybtii hore ee kulankan laga ururiyay ayaa si cad u muujinaysa in ay Chelsea ay ahayd kooxda labaad ee ugu fiican iyada Man City wax walba kaga sarre martay dhigeed laakiin waxa loo tartamayay ee ahaa in shabaqa la gaadho ayay labada kooxood iskaga mid noqdeen qaybtii hore ee kulankan.
Goolhaye Courtios ayaa sameeyay qalad xun oo uu sabab ugu noqon gaadhay in Gabriel Jesus uu Man City u dhaliyo goolka furitaanka laakiin xidiga ree Belgium ayaa ka badbaaday in uu qaato masuuliyada gool xili hore kooxdiisa laga dhalin lahaa.
Ciyaarta ayaa noqotay mid adag isla markaana ay inta badan Man City kubbada haysatay halka Chelsea ay weeraro culus oo deg deg ah ku raadinaysay goolka furitaanka laakiin daqiiqadii 35 aad Chelsea ayay dhibaato wayni soo gaadhay kadib markii uu Alvaro Morata dhaawac muruqa ahi soo gaadhay wuxuuna xidiga ree Spain awoodi waayay in uu ciyaarta sii wadan karo waxaana lagu soo badalay Willain iyada oo Eden Hazard uu safka weerarka dhexe u dhaqaaqay.
DAQIIQADII 45 AAD Goolhaye Courtios ayaa sameeyay gool badanaain layaableh oo xataa barta twitterka Chelsea ay u qirtay sida cajiibka ahayd ee uu Fernandinho uga beeniyay gool cadaan ahaa, waxayna markan City wayday goolka ay hogaanka ciyaarta ku qaban kartay qaybtii hore ee ciyaarta.
XOGTA ISBARBAR DHIGA CHELSEA IYO MAN CITY EE QAYBTII HORE EE CIYAARTA:
Darbooyinka goolka: Chelsea 2-9 Manchester City
Saxnaanta Kubbada Bixinta : Chelsea 80%-92% Man City
Kubad Dhiibista Guud: Chelsea 130 – 309 Man City
Fursadaha la abuuray : Chelsea 2-7 Man City
Boosishanka : Chelsea 40%-60% Man City
Haddii kubbad bixin iyo baas ciyaar loogu guulaysanayo waxay Manchester City qaybtii hore ee kulankan ahayd kooxda kubbada shaqada ugu badan ku qabtay laakiin waxaa lagu kala nastay barbaro gool la’aan ah, waxaana la sugayay waxay labada kooxood samayn doonaan 45 kii daqiiqo ee qaybtii danbe.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Chelsea soo laabtay iyada oo dardar fiican ku socota laakiin wali Manchester City ayaa ahayd kooxda halista ugu badan abuuraysay balse Sky Blues ayaa iska lumisay fursado cajiib ah iyada oo Blues nasiib ku lahayd in Aguero uu kulankan maqnaa maadaama oo ay kubado uu goolal badan ku dhalin jiray ay waayeen dhamaystir.
David Silva ayaa daqiiqadii 66 aad u muuqday mid dhalinayay goolka furitaanka ee Manchester City laakiin fursada cadaanka ahayd ee uu Silva goolka Chelsea ku bartilmaameedsan lahaa ayuu Marco Alonso si cajiib ah u daboolay waxaana xigay fursado ay City wali sii lumisay.
DAQIIQADII 67 AAD Ugu danbayn Manchester City ayaa la timid goolkeeda furitaanka waxaana cidkasta ka yaabsaday Kevin De Bruyne kaas oo gool cajiib ah ku ugaadhsaday kooxdiisii hore ee Blues kadib markii uu kubbad caawin ka helay Gabriel Jesus isla markaana uu darbo xoogan uu lugtiisa bidix ku tuuray wuxuuna De Bruyne si fiican u garaacay goolhayaha qarankiisa Belgium ee Courtios waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay City hogaanka ciyaarta ku qabtay.
DAQIIQADII 72 AAD Antonio Conte ayaa shaxdiisa laba isbadal oo isku mar ah ku sameeyay wuxuuna ciyaarta ka saaray Eden Hazard iyo Bakayoko isaga oo kaydka uga yeedhay Batshuayi iyo Pedro Rodriguez si ay kooxdiisa laakiin wali City ayaa dhibaato badan ku haysay kooxda Antonio Conte oo u muuqatay in ay dareemaysay daalkii Atletico Madrid.
DAQIIQADII 84 AAD Antonio Rudigers ayaa xariiqda goolka ku soo qabtay kubbad ciyaartay ay Manchester City ku dili kartay kadib markii uu Gabriel Jesus la kulmay kubbad u Sterling soo karoosay, waxayna xaaladu noqotay mid blues ku sii adkaatay.
Dhamaadkii ciyaarta Guardiola ayaa ciyaarta ka saaray David Silva wuxuuna kaydka uga yeedhay Bernardo Silva halka uu sidoo kale Lorey Sane badalay wuxuuna ciyaarta soo galiyay Ilkay Gundogan si ay khadka dhexe awood xoogan ugu sii yeeshaan.
Dhamaadkii ciyaarta Chelsea ayaa awoodeeda iskugu gaysay sidii ay goolka barbaraha ugu keensan lahayd laakiin Manchester City ayaa u muuqatay mid difaac ahaan si wayn ugu nidaamsanayd waxayna Blues awoodi wayday in ay wax gool ah kula timaado Stamford Bridge.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 1-0 uu ugu danbayn Gauardiola uu Antonio Conte garoonkiisa ugu soo garaacay isaga oo ka soo kabsaday labadii guuldaro ee xili ciyaareedkii hore ka soo gaadhay, waxayna guushani City ka caawisay in ay Man City dib ugu soo laabtay hogaanka Premier Leaque iyaga oo markale Man United isku dhibco ah balse Sky Blues ayaa farqiga gooalsha hogaanka ku qabtay.